Ahoana ny fomba fiasan'ny auto backlinks dia mety hisy fiantraikany amin'ny SEO tranonkala?
Amin'ity lahatsoratra ity, dia hizara aminareo ny traikefako momba ny fampiasana mpamorona auto backlinks. Ny auto-backlinks dia matetika hevitra ratsy momba ny fampiroboroboana ny aterineto izay manintona amin'ny fitaovam-pikarohana toy ny fihetsiketsehana spammy ary mety handrava ny lazanao marobe sy ny laharan'ny sehatra.
Ho an'ireo mpivarotra an-tserasera izay nampiasa ny iray amin'ireo programa ireo hamoronana rindran-damba, dia hanoritra ny sasany amin'ireo antony mahazatra amin'ny fampiasana ity karazana SEO software ity fa tsy ny hevitra tsara indrindra anao. Fomba fijery fohy amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena fikarohana izay mety hiteraka sazy henjana amin'ny milina fikarohana. Ny fotoana sy vola azonao ampiasaina amin'io asa io dia tsara kokoa amin'ny fampiasana paikady maotera.
Auto backlinks ny fiantraikany eo amin'ny tranokala SEO
Ny tanjona voalohany amin'ny famerenana bakalorea dia ny mamorona fifandraisana mifandraika eo amin'ny loharanom-baovao roa
Maro ny tompona tranonkala, indrindra ireo izay vaovao ao amin'ity sehatra ity, tsy mahatsapa fa ny kalitao sy ny lanjan'ny backlinks dia roa ny lafiny lehibe indrindra amin'ny fananganana rohy. Ny rindrambaiko SEO an-tserasera dia tsy afaka mifantoka amin'ny kalitao taranja sy ny maha-zava-dehibe satria ireo lafiny roa ireo dia mitaky fahatsapana ny fahatsapana sy ny fifehezan'ny manam-pahaizana manokana. Izany no antony tokony hananganana fotoana sy ezaka mandritra ny fanentanana fananganana rohy. Amin'ny ankapobeny, amin'ity tranga ity, ny fanentanana fananganana tranokala dia afaka manatsara ny tranonkalan'ny fanamafisana ny tranonkalanao ary hitondra fifamoivoizana momba ny fifandraisana amin'ny kalitaon'ny tranonkalanao.
Google dia miady mandrakariva amin'ny taranaka mpamorona rindrambaiko
Mankasitraka ny fanatsarana ny fikarohana ary manandrana manohitra ny fomba amam-panao maimaim-poana amin'ny Internet, momba azy ireny ho ambany kalitao sy spammy.
Nisy fe-potoana tsy ahafantaran'ny tompon-tranonkala ny hatsaran'ny rohy ivelany izay manondro ny sehatr'izy ireo. Azo atao ny manangana ny pejy web amin'ny alàlan'ny fahazoana bakolazo kokoa. Na izany aza, lasa tsy voafehy ny toe-draharaha, ary nametraka fitsipika vaovao i Google. Araka ny filazan'izy ireo dia ny vokatra azo avy amin'ny fatrana ara-organika ihany no mety ho fiantraikany eo amin'ny sehatry ny tranokala.
Noho izany, ny fanontaniana dia hoe nahoana isika no mila mampiasa ny fotoantsika sy ny volantsika amin'ny rindrambaiko fanorenana rindrambaiko maimaim-poana raha toa ka manohy miady amin'ny fitaovana fampifandraisana amin'ny rohy ny moter fikarohana.
Raha toa ka misy sazy ho an'ny fampiasana rindrambaiko fanorenana rindrambaiko ny tranokalanao, dia mety ho sarotra ny hamadika ny voka-dratsy eo amin'ny tranokalanao SEO
Ny tranokalanao mifandraika amin'ny tranokala SEO amin'ny tranonkala SEO ny tanjona voalohany dia ny manosotra ny volanao. Manoro hevitra mafy aho ny hanakatona ny baikon'ny manam-pahaizana SEO na manao ny zava-drehetra amin'ny tenanao mandritra ny fizotry ny taranaka jiosy. Raha tsy izany, ny fotoananao mafy, ny fotoana sy ny vola fampiasam-bola dia fotoana mandany fotoana. Ankoatra izany, mety hampidi-doza ny mahazo sazy avy amin'i Google izay sarotra ny hivadika.
Na izany na tsy izany, ho an'ireo webmasters izay efa mampiasa io karazana rindrambaiko fanorenana rohy io, dia ataovy azo antoka fa afaka manamarina ny rohy rehetra sy ny tranonkala misy azy ireo ianao. Ankoatr'izay, ny dingana rehetra dia tokony ho tarihan'ny manam-pahaizana manokana momba ny SEO izay afaka manome anao tatitra rohy raha ilaina izany Source .